VM ngwa ngwa mepere emepe ọtụtụ akpa nzacha - China VM na-emeghe ngwa ngwa nke ọtụtụ nza ụlọ na-eweta ihe mkpuchi, actorylọ ọrụ –Sffiltech
VM ngwa ngwa na-emepe emepe ọtụtụ akpa akpa
Ọsọ na-emepe ọtụtụ akpa akpa ụdị nzacha ụlọ - usoro VM
VM usoro ngwa ngwa imeghe ọtụtụ akpa ụdị nzacha ụlọ, ka elekwasị anya arụmọrụ na nchekwa na ịdịte aka nke ndị ọrụ haziri, ọkachasị ejiri ya na ihe adịghị ike, achọrọ ihe ndozi kwesịrị ka edochie ya ugboro ugboro na nrụpụta na-aga n’ihu na ngwa ngwa ịgbanwee ngwa ngwa, ụlọ nzacha VM bụ ngwá ọrụ dị nkọ. iji meziwanye nrụpụta arụmọrụ. Ndozi ihe ndozi di ngwa ngwa ma nwekwa ntukwasiobi, na-ebelata oke ihe nsogbu nke ihe ndaputa n’aru ihe ndi ozo dochiri anya, meziwanye ihe mmeputa, n’otu oge ahu belata oke oru ndi oru.
Eserese mkpuchi oghere VM
Sekọnd kachasịnụ 15 sekọnụ gaa NA / Gbanyụọ ụlọ nzacha, dochie ngwa ndozi ahụ;
Gbanye / Gbanyụọ n'ọnọdụ dị obosara, ọ dịghị mkpa ịgba gburugburu ụlọ nzacha iji mee ka nri sie ike;
Site na iji akwa nchekwa, nrụpụta ike iji mepee ụlọ nzacha;
Ike ndọda inyeaka usoro aka ọrụ, otu mkpịsị aka nwere ike ịkwagide n'akụkụ ọ bụla nwere ike imeghe;
Mpempe mkpuchi mepere emepe, plurality nke kọmpat nwere ike ịbụ ihe yiri ya, na-echekwa oghere nrụnye na ọnụego piping;
Na akpa pụrụ iche na-ejide ngwa na - ejikọ aka na - arụ ọrụ, ọrụ dị mfe na ọrụ;
Nhọrọ nke ụdị dị mma O ụdị elastomer akara aka mgbaaka, arụmọrụ kacha mma na akara oge ndụ;
Emere akwa ọla kọpa, eriri ahụ adịghịzi na eri ahụ, ihe a na-atụgharị oge na-echekwa oge na ichekwa ọrụ;
8 ụdị, n'otu n'otu, akpa atọ, akpa anọ, akpa ise, akpa isii, akpa asatọ, akpa iri na abụọ, akpa iri na asaa, akpa iri abụọ na atọ;
ụdị mbubata mbubata mbupụ na mbupụ, njiri mara mma na ntinye.
Mgbe oge ụfọdụ gasiri, usoro ndochi bụ ndị a:
Kwụpụ 1: mepee ngwaọrụ mkpọchi nchekwa iji hụ na enyemaka nrụgide synchronous.
Nzọụkwụ abụọ: were aka gị bugharia aro a, mepee hoop n'enweghị nsogbu
Nzọụkwụ atọ: jiri usoro mgbụsị akwụkwọ enyere aka iji mepee ihe mkpuchi elu.
Nzọụkwụ anọ: ojiji nke nrụgide mgbachi ngwa, mgbanaka Rotary oghe
Kwụpụ ise: wepụ akpa, gbanye n'ime akpa ọhụrụ
Kwụpụ isii: mechie mkpuchi elu
Kwụpụ asaa: were aka were bugharia aro a.
Nzọụkwụ asatọ: mechie ngwaọrụ ngbachi nchekwa, tinye ọkwa nke ọrụ na-aga n'ihu
Ihe Mbughari: Ebufe ya na ubochi asaa ka ugwo
Anyị na-elekọta ihe niile gbasara mmiri mmiri igwe anaghị agba nchara, ọbụlagodi otu obere akụkụ anyị chọrọ ka njikwa mma kachasị mma
1. Anyị na-esite na 2006, karịa ahụmahụ 10 maka ahịa mbupụ, yabụ anyị maara nke ọma ọnọdụ ọnọdụ ọrụ na mba ofesi
5.Ọdịmma dị mma na Asambodo weghaara FDA, MSDS, ISO9001 na ule ndị ọzọ.